प्यारासिटामोल यसकारण हुनसक्छ खतरनाक, के हुन्छ ?
प्यारासिटामोल एक दुःखाई कम गराउने औषधि हो । तर, यसको सेवनबाट फाइदा भन्दा नोक्सान बढी हुन्छ । अझ लामो समयसम्म यसको सेवन गर्दा स्वास्थ्यका लागि अत्यधिक हानिकारक हुनसक्छ ।
सामान्य टाउको दुखाई हुनासाथ हामी पारासिटामोल खान्छौं । घरमै औषधि सेवन गर्नु सजिलो, सस्तो र समयको बचत गर्ने उपचार हो । तर, यही बानी स्थायी आदतमा बदलियो भने यसले शरीरमा कयौं प्रकारका रोगहरु जन्माउँछ ।
प्यारासिटामोल औपधि पसलहरुमा सजिलै उपलब्ध हुन्छ र यसलाई चिकित्सकको अनुमतिबिना किनबेच गर्ने गरिन्छ । यदि तपाईं पनि सामान्य टाउको दुःखाई वा ज्वरो आउनासाथ यो औषधि सेवन गर्नुहुन्छ भने सचेत हुन जरुरी छ । किनकी यसको अधिक प्रयोगले शरीरका कयौं अंगहरुलाई नोक्सान पुर्‍याउँछ ।
तपाईं आफैंले पनि प्यारासिटामोलको खोलमा ‘अधिकतम् प्यारासिटामोल सेवनबाट कलेजोमा क्षति पुग्न सक्छ’ लेखेको देख्नुभएको होला । चिकित्सकहरुका अनुसार एक व्यक्तिले एक दिनमा ३ ग्रामभन्दा बढी प्यारासिटामोल सेवन गर्नु हुँदैन । यदि खानै पर्‍यो भने चिकित्सकको सल्लाह अनिवार्य लिनुपर्छ । कलेजोले काम नगर्नेसम्मको समस्याबाट बच्न यसमा ध्यान दिनै पर्छ ।
गर्भवती र बच्चालाई असर
बिना जाँचबुझ गर्भवती महिलाले यसलाई सेवन गर्दा आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्यमा हानी पुग्छ । बच्चाको त वृद्धि प्रक्रियामै रुकावट आउन सक्छ । यसर्थ, गर्भवती आमाले बिना जाँचबुझ प्यारासिटामोल सेवन गर्नु हुँदैन ।
ब्रिटिश मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित युनिभर्सिटी अफ सिड्नीका शोधकर्ताहरुका अनुसार आस्टियोआर्थराइटिस एवम् ढाड दुख्नाई कम पनि कतिपय मानिस प्यारासिटामोल खान्छन् । यसले किड्नीमा असर पार्दछ भन्ने बारे कम मात्रै सचेत देखिन्छन् ।
पेटमा वायू र छालामा एलर्जी
कयौं घटनामा प्यारासिटामोल बढी सेवन गर्दा पेटमा ग्यास अर्थात् वायू बढ्ने देखिएको छ । यदि तपाईंलाई अपच वा पेटमा समस्या छ भने प्यारासिटामोल बढी सेवन गरेको कारण पनि यस्तो हुन सक्छ । यसका साथै केही मानिसहरुमा प्यारासिटामोलको अधिकतम् सेवनका कारण छालामा एलर्जी हुने र छाला रातो हुने समस्याका साथै दाद र छाला पोल्ने समस्या देखिने गरेको छ ।
दम र स्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या
थोरै ज्वरो आउनासाथ हामी बच्चालाई प्यारासिटामोल दिन्छौं । तर कयौं सोधहरुले ६-७ वर्ष उमेरका बच्चाहरुलाई प्यारासिटामोल खुवाउँदा उनीहरुको शरीरमा दम र स्वासप्रश्वासजन्य समस्याहरु बढ्ने पुष्टि भएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार बच्चालाई १०१.३ °F ज्वरो आएपछि मात्र सिटामोल ख्वाउ पर्छ ।
यसका साथै धेरै प्यारासिटामोलको सेवनको कारण शरीर कमजोर हुने समस्या पनि देखिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ ।
कोरोनाको संक्रमण रोक्न ५० हजार स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गर्ने सरकारको निर्णय
नेपालमा यस्तो देखिन्छ कोरोना परीक्षणको अवस्था
भारतमा ३ हजार नाघ्यो कोरोना संक्रमित, एक दिन १५ जनाको मृत्यू
यसरी बनाउनुहोस् घरेलु ह्याण्ड सेनिटाइजर
२५ देखि ५० प्रतिशतसम्म संक्रमितमा लक्षण नदेखिने नयाँ अनुसन्धानको खुलासा
अब हेटौंडामा पनि कोरोना परीक्षण हुने
लकडाउनमा घरमै हुनुहुन्छ ? दुईटा केरा खानुहोस्